I-Golfer Mike Souchak: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
I-Golfer Mike Souchak iqhutywe kwi-PGA Tour kuma-1950, kwaye ibeka amanqaku amaninzi eeholide kwi-1955 i- Texas Open- enye eyayiminyaka emininzi.
Umhla wokuzalwa: ngoMeyi 10, 1927
Indawo yokuzalwa: eBerwick, Pa.
Umhla wokufa: Julayi 10, 2008
1955 I-Texas Open
1955 I-Houston Open
1956 Agua Caliente Vula
1956 Azalea Vula ummemo
1956 Isimemo seSizwe samaKoloni
1956 USt. Paul Vula
Ngowe-1958 uSt. Paul Vula ummemo
Ngowe-1959 Iingqungquthela zeeMidlalo
1959 IWest Open
1959 IsiXeko seMoto esivulekileyo
1960 I-San Diego Vula isimemo
1960 Buick Vulekile ukuMema
1961 I-Greater Greensboro Open
1964 eHoston Classic
Ngowe-1964 iMemphis Iimemo ezivulelekileyo
• Ilungu, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1959, ngo-1961
• Ilungu, iDuke University Sports Hall of Fame
Ngama-1955 eTexas Open, uSouchak wabeka amanqaku amanqaku e-PGA Tour, afaka amanqaku ngokumalunga nama-27-ngaphantsi kwe-1998; kunye namanqaku amanqaku angama-257 awamisa ngo-2001.
Omnye wabaqhubi bexesha lakhe, uMike Souchak wayengavumelekanga kwi-golfer yobugcisa kwi-1950: Wayeyimisipha kunye nezemidlalo. Wabeka loo mfanelo ukuba isebenzise kakuhle, njengokuba wayekhe wachaza kwi- Sports Illustrated , ngokuthatha inxaxheba kwimibhikano yokuqhuba umqhubi wangeveki eyandulela ukuqala kwePGA Tour tournaments: "Ndandifumana ukufumana imali yam yokutya ngeveki, i-$ 150 okanye i-$ 200, NgoLwesithathu ukuqhuba imincintiswano. "
U-Souchak wakhonza iminyaka emibini e-Navy ngaphambi kokuya ekholejini kwiYunivesithi yaseDuke, apho waphumelela khona ngo-1952. KuDuke, uSouchak wadlala igalofu, ebancedisa iqela kwiintlabathi. Kwakhona waba neenkwenkwezi kwibhola lebhola, edlala ekugqibeleni kwizophulo kunye nokuzikhusela, kunye nokufumana iindwendwe zonke zeenkomfa njengendawo yokubeka indawo.
U-Souchak waphendukela kwiprogram njenge-golfer ngo-1952. Kuthatha iminyaka emithathu ukuba anqobe umcimbi wakhe wokuqala wePGA Tour , kodwa ukulinda kwakufanelekile. Ngo-1955 i-Texas Open, uSouchak wabeka zonke iindidi zokurekhoda:
Wavula nge-60, eyayibophelela irekhodi engama-18 yokufaka amanqaku apho .
I-60 yayiquka i-9 engama-27, ebeka irekhodi elitsha le- 9-pit hole .
Amanqaku angama-27 angaphantsi kwamanqaku ngokubhekiselele kwirekhodi kwakukho irekhodi elade lada lafika ngo-1998.
Inani lakhe eli-257 laliyi- 72-hole-stroke irekodi eyayimi kude kube ngo-2001.
U-Souchak wanqoba okwesibini ngo-1955, waza wabakhokela i-PGA Tour kunye neyokuphumelela emine ngo-1956. Ukuphumelela kwakhe kuninzi yi-Tournament yeeMidlalo ngo-1959, enye yezokunqoba ezintathu i-Souchak ngaloo nyaka.
Ngoxa wayephumelele i-tournaments ye-PGA Tour ye-PGA ye-15, i-Souchak ayizange iphumelele. Ukugqitywa kwakhe okugqwesileyo kwakungumntu wesithathu kwi-1959 no-1960 I-US ivula.
U-Souchak wayeka ukudlala ixesha elizeleyo kwi-PGA Tour ngo-1966, waza waba yintloko yeprogram e- Oakland Hills Country Club eBloomfield Township, eMikh, enye yezifundo ezigxiliweyo zegalufa laseMelika.
Uthe wadlala ngokukhawuleza kwi-PGA Tour, nangona kunjalo, kwaye wajoyina iNtambo yeMatriki ngo-1981, kodwa akazange aphumelele kwesekethe ephezulu.
Ngexa e-Oakland Hills, i-Souchak yafumana ingcamango yezoshishino ezakhiwe malunga nokuhamba kweenqwelo zegalufa. Ngomnyaka we-1973, wasungula elo shishini eFlorida, kwaye wayengumninimzi-shishini waloo msebenzi waze wafa ngo-2008.
I-Shark Tank edibeneyo e-Kuwait?
UMG-17 weFresco Soviet Fighter
Umsebenzi oManzi wokuNyuselwa kwamanzi eBhitshi
-et / -ette - IsiFrentshi
IWall Wall: I-History History
I-Acid Acid Definition kunye nemizekelo